Izibalo eziyi-15 zokuthi ukunakekelwa okubucayi kunakwa kanjani yi-Marketing Yakho Yedijithali | Martech Zone
Ngibubula kancane lapho ochwepheshe bemboni beqhubeka nokufuna amazwibela amancane namancane, okuqukethwe okusheshayo nokusheshayo, amavidiyo amafushane futhi amafushane, imicimbi esheshayo nesheshayo. Kuyakhathaza ngoba kugxile ekuziphatheni kukonke hhayi ngqo ekuziphatheni kwezithameli zakho. Vele, uma ngizothenga inki yephrinta online - ngidinga ukuthola engikudingayo ngokushesha, ngibone imininingwane, bese ngibheka. Kepha uma ngithenga ipulatifomu entsha yokumaketha ibhizinisi, ngizodinga ngempela ucwaningo olwesekelayo engibona ukuthi luzodinga isikhathi eside isikhathi sokunaka ukufunda, ukubuka, ukucwaninga, njll.
Enye impikiswano engingayicindezela ukuthi izinombolo zivame ukwehla kakhulu ngoba nje izivakashi zingakutholi abakudingayo, zifike ngephutha, noma bezingebona neze abantu - beziyibhodlela. Cabanga uma ungabuyekeza izibalo ze amathuba afanelekayo kusayithi lakho. Izivakashi ezingathenga noma ezizothenga uma zinikezwe ithuba. Nginesiqiniseko sokuthi izibalo zedijithali bezingeke zibukeke zeqise njengoba zenza kule infographic.
Ngokwenkampani enakekela iwebhu nokwenza imali, iChartbeat, Ama-55% wokubukwa kwekhasi lewebhu athola ukunakwa okungaphansi kwamasekhondi ayi-15. Okwezimpawu, lokhu kusho ukuthi kunamawindi amancane kuphela ethuba lokubamba ukunakwa: Banesikhathi. Futhi kufanele benze umzuzu ngamunye ubaluleke ngokuletha 'ukuthokozisa kwedijithali okusheshayo' - ulwazi olungcono kakhulu lwamakhasimende ngokushesha. Okuqukethwe akuseyona inkosi, manje yizikhathi ezibalulekile. UBrian Rigney, isikhulu esiphezulu se-Zmags
Lesi sicaphuni sivela ku-infographic… futhi kungenza ngingakhululeki. Okuqukethwe kuseyinkosi, kufanele nje idluliselwe ngezindlela ezisebenza kahle kakhulu neziphumelelayo. Isivinini ngaphandle komlayezo empeleni asinandaba nakancane. Ngingafingqa ifilimu ye-Marvel ngeminithi eli-1, kepha akekho ozokukhokhela lokho. Abathengi basengakhokha kakhulu u- $ 15 ukuthola i-movie.
Angingqongqozi umbono we-infographic yonke futhi bengifuna ukuyihlanganyela lapha ngoba ijubane liyinto ebucayi kunoma yisiphi isipiliyoni sedijithali. Ama-Zmag asendleleni efanele - sidinga ukuhlala sicindezela imvilophu ekunikezeni izivakashi zethu umuzwa ophakeme womsebenzisi lapho imiyalezo kulula ukuyithola futhi idluliswa ngempumelelo ngezindlela ezimfushane ngangokunokwenzeka. Noma yini enye futhi uzolahlekelwa ababukeli bakho abaqeqeshiwe.
Inothi eliseceleni… kodwa liyahlekisa. Mina ulungiselele isithombe se-infographic ngezansi futhi ilayisha i-17% ngokushesha. Hehe.
Ungalanda i-e-book yeZmags, Ukulawula Ukukhangisa Ngomzuzwana ukufunda amasu abalulekile wokuthola ukunakwa kwabathengi.
Tags: isikhathi sokunakaizibalo zesikhathi sokunakaUBrian Rigneyizibalo zokuziphatha kwabathengiizibalo zabathengiizibalo zokuziphatha onlineisivinini sekhasiijubaneizibaloAma-Zmag